China JB160A Hydraulic Walking Piling Rig စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | အင်ဂျင်နီယာစက်
JB စီးရီးဟိုက်ဒရောလစ် Walking Piling Rig သည်လျှပ်စစ်၊ ၎င်းသည်လွတ်လပ်သောအိမ်ခြံမြေအခွင့်အရေးများကိုလုံးလုံးပိုင်ဆိုင်ပြီး၎င်း၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာကြောင့်တရုတ်အစိုးရထံမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတူးစင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ခြင်းကို SMW နည်းလမ်း (Soil Mixing Wall method) တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါတူးစင်သည်ဒီဇယ်ပုံတူ၊ ကြိုတင်ပျံနှံထားသည့်ကြိုတင်ပုံသွင်းကိရိယာများနှင့်တွဲစပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၊ အမြန်လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရေကျင်းများ၊ ။
FOB စျေးနှုန်း: US $ 0.5 - 9,999,999 / Piece
min ။ အမှာအရေအတွက်: 1 အပိုင်းအစ
Supply နိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 100 Piece / အပိုင်းအစများ
၁။ ပိုမိုထိရောက်သော၊ တည်ငြိမ်နိုင်သောနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်သော
ခေါင်းဆောင်၊ အဓိကပလက်ဖောင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ဂီယာသည်ပိုမို၍ တည်ငြိမ်ပြီးထိရောက်သောအလုပ်များကိုသေချာစေရန်အတွက်
Rotary pin ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူပလက်ဖောင်း၏အစပျိုးမှုများကိုဆလင်ဒါဖြင့်မောင်းနှင်သည် ။
၃။ ADVANCED ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL SYSTEM AND TECHNOLOGY
အဓိကဒရမ်နှင့်အရန်ဒရမ်နှစ်ခုလုံးသည် electro-hydraulic အချိုးကျထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီး၊ အမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အဓိကစုပ်စက်၊ ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်၊ ဖိအားအတိုင်းအတာ၊ ဗုံအားလုံးသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကြသည်။
နက်ရှိုင်းသောရောစပ်ခြင်းပုံမော်နီတာ (optional) သည်ပုံ၏အတိမ်အနက်၊ piling အမြန်နှုန်း၊ slurry ပမာဏနှင့်အချက်အလက်များ၏ output ကိုဖော်ပြသည်။
၅။ လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဆင်ပြေသော CAB
လေအားကာကွယ်သောငါးခုပါ ၀ င်သောကောင်းစွာကာကွယ်ထားသောအော်ပရေတာ၏အခန်းသည်တောက်ပ။ တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနည်းဆုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်အာမခံပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် actuated ဝန်တင်လက်ထိန်းချုပ်ကိရိယာလီဗာကောင်းစွာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။
Drill control box အတွက်နေရာ၊ inductive load angle monitor (optional)၊ deep mixing monitor (optional) ကိုအော်ပရေတာ၏အခန်းတွင်ထားရှိသည်။
1. JB160A သည်ဗုံသံဗူးများတပ်ဆင်ထားသည်။ စံခေါင်းဆောင်သည်အမြင့် ၃၉ မီတာ (Max.42m) ဖြစ်ပြီး SMW နည်းလမ်းအတွက်သင့်တော်သည်။
2. အလျားလိုက်ဆလင်ဒါအလျားသည် ၃၁၀၀ မီလီမီတာအထိရှိပြီး SMW နည်းစနစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
3. JB160A ဓာတ်လှေကားအတွင်းမှအမြင့် ၉၀၀ မီလီမီတာကိုသေချာစေသည်။
၄။ ထူးခြားသောတည်နေရာအနေအထားတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းသည် ။ JB160A သည်အမြင့် ၃၉ မီတာရှိသည်။
5. JB160A was granted complete intellectual property rights and7authorized ။
ပစ္စည်း JB160A Hydraulic Walking Piling Rig
စုစုပေါင်းခေါင်းဆောင် (အရှည်) 21 ～ 39
ခေါင်းဆောင်၏အချင်း (mm) 9920
ခေါင်းဆောင်နှင့်တပ်ဆင်ထားသောကိရိယာများအကြားဗဟိုအကွာအဝေး (mm) 600 × 1101.6
ခေါင်းဆောင်သောအတောင်ထောင့် (ဘယ်မှညာသို့) (°) ± 1.5
Backstay လေဖြတ် (mm) 2800
Leader ကိုချုံ့ရန်ဆလင်ဒါ stroke (mm) 400
မက်စ် သြဂုတ်လမော်ဒယ် ZLD180 / 85-3-M2-S ကို
မက်စ် ဒီဇယ်တူမော်ဒယ် D160
မက်စ် ခေါင်းဆောင်အရှည် ()) 39
မက်စ် ဆွဲအား (Max ။ ခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ) (KN) 706.3
ဟိုက်ဒရောလစ် winch (mounting auger၊ ဒီဇယ်တူ) အတွက် တစ်ခုတည်းကြိုး၏ဆွဲအား (KN) 91.5max
ခွံကြိတ်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်း (m / min) \_ t0～ 26
ကြိုးအချင်း (mm) o21.5
စည်ပမာဏ ()) 550
ဟိုက်ဒရောလစ် winch (မြှင့်ခြင်း၊ တူးခြင်း၊ ပုံအတွက်) တစ်ခုတည်းကြိုး၏ဆွဲအား (KN) 68max
ခွံကြိတ်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်း (m / min) \_ t0～ 32
ကြိုးအချင်း (mm) o20
စည်ပမာဏ ()) 265
လွှဲထောင့် (°) ± 10
transverse ခရီး ခရီးသွားနှုန်း (m / min) <၄.၅
ခရီးသွားခြင်းအဆင့် (mm) 3100
ဒေါင်လိုက်ခရီးသွားခြင်း ခရီးသွားနှုန်း (m / min) <၂.၇
ခရီးသွားခြင်းအဆင့် (mm) 800
လမ်းကြောင်း၏ Uplift မြန်နှုန်း (m / min) <0.55
အမြင့် (mm) + 450 ～ -450
လမ်းကြောင်းများအကြားအကွာအဝေး အလုပ်လုပ်သည် (mm) 9100
ခရီးသွားခြင်း (mm) 4800
လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိစက်သီးများအကြားအကွာအဝေး အလုပ်လုပ်သည် (mm) 4800
ခရီးသွားခြင်း (mm) 5000
transverse- ရွေ့လျားလမ်းကြောင်း အရှည် (mm) 9500
အကျယ် (mm) 1200
ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားလမ်းကြောင်း အရှည် (mm) 6900
အကျယ် (mm) 1700
outrigger ရောင်ခြည်နှင့်ပလက်ဖောင်းအကြားဆက်သွယ်မှု pin rotary, ဆလင်ဒါချဲ့ထွင်
ပျမ်းမျှမြေပြင်ဖိအား (MPA) .10.1
မော်တာပါဝါ (kw) 45
ဟိုက်ဒရောလစ်စည်ကားသောစနစ် (MPA) ၂၅/၂
ဟိုက်ဒရောလစ်စည်ကားစနစ်ကစစ်ဆင်ရေး လက်စွဲစာအုပ် & လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု
ပုံသေနည်းစုစုပေါင်းအလေးချိန် (T) 30130
အထူးလိုအပ်ချက်အရခေါင်းဆောင်အရှည် ၄၂ မီတာအထိတိုးနိုင်သည်။
MEXICAN PROJECT ကုန်ပစ္စည်း: D100 & JB160A / TAIYUAN PROJECT ကုန်ပစ္စည်း: ZLD180 & JB160A / PHILIPPINE PROJECT ကုန်ပစ္စည်း: D138 & JB160A / SHANGHAI EXPO SITE ထုတ်ကုန်: ZLD220 & JB160A / MALAYSIA PROJECT ကုန်ပစ္စည်း: ZLD180 + JB160A
ခေါ်ဆိုမှုစင်တာဝန်ဆောင်မှု ၂၄ နာရီအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုစင်တာကိုကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ SEMW ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာနောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အား + 0086-21-4008881749 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ခွင်နေရာများ၊ မြေဆီလွှာအခြေအနေနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များအရအခမဲ့အကြံပေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
လေ့ကျင့်ခြင်း SEMW သည်သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အခမဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူထားသည်။
ဖြန့်ချိသောထုတ်ကုန်အသစ်များ၏သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများပိုမိုပေးသည် ။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့အဘို့အထူးကမ်းလှမ်းမှုကိုပေး။
ဒီဇယ်သံတူများသည် SEMW ၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင်နာမည်ကောင်းရကြသည်။ SEMW ဒီဇယ်သံတူများသည်ဥရောပ၊ ရုရှား၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိကနှင့်အာဖရိကသို့အမြောက်အများတင်ပို့သည်။
ရှေ့: SPR 115 ဟိုက်ဒရောလစ်ပုံမောင်းနှင်သည့်ရေတူးရန်
နောက်တစ်ခု - JB170 ဟိုက်ဒရောလစ်လမ်းလျှောက်ပုံရေနံတူးစင်
Jb စီးရီးဟိုက်ဒရောလစ် Walking Pilling တူးစင်
Pilling Rig လမ်းလျှောက်
Walking Pilling တူးစင်ထုတ်လုပ်သူ
SPR 115 ဟိုက်ဒရောလစ်ပုံမောင်းနှင်သည့်ရေတူးရန်
Dra25 / 12 Dual Power Drilling Rig ၊ Dra စီးရီးနှစ်မျိုးပါဝါတူး ၊ Dual Power Drilling Rig ၊ တရုတ် Hm စီးရီးဟိုက်ဒရောလစ်တူများ ၊ Dra13 /5နှစ်မျိုးပါသောရေတူးစင် ၊ Dra25 / 18 Dual Power Drilling Rig ,ထုတ်ကုန်အားလုံး
အမှတ် ၂၈၈ Yangnan လမ်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် 201901
版权所有:上海工程机械厂有限,备案号:沪 ICP 备 ၁၁၀၂၉၀၁၃ 号技术支持:全球搜公司